ငှက်သူခိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
Range of M. solitarius Breeding Resident Passage Non-breeding Vagrant (seasonality uncertain)
ငှက်သူခိုး (ဗိုလ်တဲငှက် ဟုလည်းခေါ်) သည် မြေလူးငှက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ပါဏဗေဒအမည်မှာ မွန်တီကိုလာ ဆိုလီတာရီယပ် ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်တဲ၊ မင်းတဲ အစရှိသော အဆောက်အအုံများ၏ ခေါင်မိုးပေါ်တွင် နားနေတတ်သဖြင့် ထိုငှက်ကို ဗိုလ်တဲငှက်ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသည်။
ငှက်သူခိုးသည် အလျား ၉ လက်မရှိသည်။ ငှက်မသည် ငှက်ဖိုထက်ပို၍ အရောင်အဆင်းညိုပြီးလျှင် မွဲခြောက်သည်။ ကိုယ်ကို တည့်မတ်စွာထား၍ အမြီးကို မှန်မှန်မြှောက်ချည်ချချည် လုပ်တတ်သည်။ ငှက်သူခိုး၏အသံသည် ဖားအော်သံနှင့် တူသော်လည်း အလွန်တိမ်၍ ညင်သာသည်။ သစ်သီး၊ သစ်ဖု၊ ပိုးကောင်၊ မွှားကောင်၊ ဖား၊ ခရုတို့မှာ ငှက်သူခိုး၏အစာ ဖြစ်သည်။
ငှက်သူခိုးသည် ကက်စပျန်ပင်လယ်မှ တိဗက်ပြည်နှင့် ဟိမဝန္တာတောင်တန်းများကို ဖြတ်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံတို့အထိ အနှံ့အပြားနေသည်။ ဆောင်းရာသီ၌သာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်တတ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သားပေါက်ကြောင်း ခိုင်လုံစွာ မသိရချေ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Monticola solitarius". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်သူခိုး&oldid=718869" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။